Wednesday, 06 February 2013 10:01	नागरिक
म अब 'अयोग्य' रहिनँ। मेरो परिचय फेरिएको छ। सरकारले बिल्ला फेरिदिएर मलाई 'बहिर्गमित' बनाइदिएको छ। यतिखेर अयोग्य र बहिर्गमित दुई शब्दबीचको अन्तर खोजिरहेको छु। शब्दकोशमा दुई शब्दका अन्तरले मलाई केही राहत मिलेको छ। सँगै अयोग्य बनाइएका कतिपय सहयोद्धा यसैगरी आफ्नो बिल्ला र त्यसको अर्थ खोज्दा हुन्। अचेल ती सहयोद्धाहरूसँग सम्पर्कमा छैन र तीसँग जोडिने चाहना पनि छैन। बितेका दिन र घटनासँग मेरो कुनै लगाव छैन, बरु विमोह छ।
Saturday, 02 February 2013 15:25	नागरिक
सञ्जीव उप्रेती- अक्टोबर १, २०१२ को दिन बोस्टनको लोगन विमानस्थलमा ओर्लनेबित्तिकै दश वर्षभित्र अमेरिकामा भएका परिवर्तनका संकेत देखिन थाले। १९९० को दशकमा सात वर्ष अमेरिका बस्दा बाटो पत्ता लगाउन हामी पारम्परिक नक्सा प्रयोग गर्थ्यौं। अहिले भने धेरै कुरामा परिवर्तन आइसकेछ। अर्चना र मलाई लिन आएका नेपाली साथीहरूका कारमा बाटो देखाउने जीपीएस उपकरण थियो।
Saturday, 02 February 2013 15:24	नागरिक
शरीर कमाउने पुसको जाडो। अमेरिकी शहर न्यु योर्कमा दिउँसो तीन बजेको छ। त्यहाँका सबवेमा चल्ने रेलमा चढ्न लाम लागेका सर्ट, टाइ, कोट, स्कर्ट, ज्याकेट र जुत्तामोजामा ठाँटिएका हुलका हुल पुरुष/महिला यात्रुले धमाधम प्यान्ट खोलेर झोलमा हाले। उनीहरू रेल चढे र आफैंमा मस्त भएर बसे। उनीहरूले प्यान्ट खोली कट्टु मात्र लगाएर रेल चढेको देख्दा अरु यात्रु भने अचम्म मानेर हाँसिरहेका थिए।
Tuesday, 29 January 2013 15:08	नागरिक
कल्पना बान्तवा- सबैका आमा-बाबु खास हुन्छन्। आ-आफ्ना भोगाई विशेषका कारण चर्चा गर्न योग्य ठहरिन्छन् पनि। तर हाम्री आमाको कुरो अलि बेग्लै। प्रेमको बलिवेदीमा होमिएर भौगोलिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा जबर्जस्त फेरिँदासम्म पनि हात लाग्यो सुन्ना! जीवनको उत्तरार्द्धमा नितान्त एक्लो र पराश्रित बूढेसकाल उहाँको नियति बनेको छ।
जातले डामेको मान्छे
Tuesday, 29 January 2013 15:07	नागरिक
कमल नेपाली- हामी प्रायः साँझपख स्वयम्भू चोकतिर बरालिन्थ्यौँ। चोकछेउ तारबारले घेरिएको खाली ठाउँमा बजार लाग्छ। एक लहर तरकारी र अर्को लहर कपडा फिँजाइएका हुन्छन् बिस्कुनजस्तै। वैंशले हमला गरिसकेको उमेर तरकारी र कपडा हेरेर मात्र के मान्थ्यो? योजनाबिनै पनि हाम्रा आँखा तरुनीतिर गइहाल्थे।
प्रयोग हुँदै लीलासम्म
Tuesday, 29 January 2013 15:06	नागरिक
कृष्ण धरावासी- पाठकहरू नयाँपन चाहन्छन्। लेखकहरू पनि अरुभन्दा भिन्न लेख्न चाहन्छन्, सधैं। लेखक र पाठक बीचको यो सकारात्मक द्वन्द्वबाटै साहित्यमा अनेकौं प्रयोग र दृष्टिकोणहरू जन्मन्छन्। भाषामा, शैलीमा र विषयमा हुने यस्ता प्रयोग कतिपय स्थापित हुन्छन् त कतिपय त्यत्तिकै हराउँछन्। प्रायः युरोपतिर विकसित हुने यस्ता प्रयोग र धाराहरू युरोप बाहिरका साहित्यले पनि ग्रहण गरेका छन्। कतिपय प्रयोग दुरूस्तै भित्रिए त कतिपय स्थान, काल, परिवेश र संस्कृतिअनुसार मौलिकतासहित विकसित भए।